Harry Potter _ The Illustrated Collection
Home > Our Products > Young Adult Reader > Harry Potter _ The Illustrated Collection
Tags: young adult reader, harry potter, young reader
The first four books in the Harry Potter series, gorgeously illustrated in full color by Jim Kay.
4 books (Hard cover_ Colourful)
Size - 26*22 cm
320_440 pages per book
_ The first four books in the Harry Potter series, gorgeously illustrated in full color by Jim Kay.
_ This beautifully produced set is the perfect introduction to the Harry Potter series, and an impressive gift for new readers and lifelong fans alike.
_ It contains the first four books in the series ( Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire) in large-scale editions, gorgeously illustrated in full color by award-winning artist Jim Kay.
_ These editions areapleasure to read, with generously sized pages, color on every page, andaribbon bookmark in each volume.
_ A full-color slipcase featuring red foiled lettering and Kay's brilliant depiction of Diagon Alley completes the package, making this collectionaluxurious gift for readers and Harry Potter fans of all ages.
Harry Potter ဆိုတာနဲ့ မှော်စွမ်းအင်တို့အကြောင်း ၊ မှော်ကျောင်းတော်ကြီးတွေကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။
Harry Potter ဝတ္ထုတိုင်း ၊ ရုပ်ရှင်တိုင်းဟာ လူငယ်၊ လူလတ် မရွေး ကြိုက်ကြပါတယ်။ Fantasy & Fiction အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ထူးခြားမှု ၊ မှော်ပညာရပ်ပေါင်းစုံထွန်းကားတဲ့ကျောင်းတော်ကြီး ၊ မှော်အစွမ်းများဟာ လူငယ်တိုင်းရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားစေနိုင်တာအမှန်ပါပဲ။
Harry James Potter သည် J.K.Rowling ၏ဝတ္တုတွဲများတွင် အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။၏လူငယ်ကြိုက်ဝတ္တုဖြစ်ခဲ့ပြီး ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဝတ္ထုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Harry သည် မိဘမဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့တွင် မှော်အတတ်ပညာများကို စတင်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ကြင်နာတတ်သော ကျောင်းအုပ်ကြီး Albus Dumbledore နှင့်အခြားကျောင်းပါမောက္ခများ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော Ron Weasley နှင့် Hermione Granger တို့နှင့်အတူ အတတ်ကိုကျင့်သုံးရန် Hogwarts စုန်းအတတ်နှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်သင်ကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ Harry မှော်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကျော်ကြားပြီးသားဖြစ်ပြီး စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်စီးရီးများသည် Harry သည် မှော်တိုင်းပြည်ကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် Voldemort ကိုအနိုင် ကြိုးစားလှုပ်ရှားမှုများကို ရေးသားထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Series တိုင်းတွင် Harry Potter ၏ စွန့်စားမှုများစွာနှင့်အတူ မှော်အတတ်ပညာများနှင့် ရန်သူများရဲ့ တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုစေနိုင်မယ့် ဝတ္တုကောင်းလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Series လေးတွေကို ဖတ်ရှူခြင်းဖြင့် ကျယ်ပြန့်သော စကားစုများ ၊ ဝေါဟာရများစွာ ပါဝင်တာမို့ ကလေးများအနေနဲ့ လေ့လာအားကို တိုးတက်စေပြီး အဂ်လိပ်စာ အသုံးအနှုန်းကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ပြီး Reading skill & knowledge ပိုင်းမှာ အမြောက်အများကို တိုးတက်လာစေမှာပါ။ ကလေးတိုင်း ဖတ်ရမပျင်းတဲ့ Fantasy & Fiction series လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Harry Potter _ The Illustrated Coll...
Dragon Breath & Hamster Princess
Romeo and Juliet - Shakepheare
The Half uponatime
The Dark Tower 8 Books Box Set
Young Reader Book Set
The Selection - Kiera Cass -5book...
Selected Poems of Tagore